Xoghoose.com Iyo Warar Xaqiiqo Ah » WARBIXIN: Hubkii cuslaa ee Muqdisho laga mamnuucay oo si caadi ah loo isticmaalo..Xoghoose.com Iyo Warar Xaqiiqo Ah
WARBIXIN: Hubkii cuslaa ee Muqdisho laga mamnuucay oo si caadi ah loo isticmaalo..
Magaalada Muqdisho, ayaa hadda si caadi ah waxaa looga isticmaalaa hubkii cuslaa ee horay Golaha Wasiirada Somaliya ay u mamnuuceen in Magaalada gudaheeda lagu dhex qaato.
Gaadiidka dagaalka oo ay wataan Saraakiisha ciidamada Booliska iyo Nabad Suggida, ayaa lagu dhex arkayaa Magaalada gudaheeda iyaga oo wata ciidanka saaran qoryaha culus, sida BKM oo horay loo mamnuucay.
Waxaa kale oo Magaalada gudaheeda lagu arkayaa gaadiid ay saaran yihiin qoriga loo yaqaan Dhashiikaha oo horay loo mamnuucay in Magaalada gudaheeda lagu dhex wato ama masuuliyiin ka tirsan Dowladda lagu ilaaliyo.
Saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda oo wata gaadiidka dagaalka ayaa la arkayaa, iyadoo ay u saaran yihiin ilaalo ka badan afar askari, xilliyada qaar gaariga cabdi bilaha meel askarta ay ka raacaan ayeey waayaan sida uu u buuxo gaariga.
Tani waxa ay muujinaysa in la jabiyay amarkii xubnaha Golaha Wasiirada Somaliya ay ku mamnuuceen hubka faraha badan ee Magaalada lagu dhex qaato iyo in gaariga la saarto ilaalo badan.
Dowladda Somaliya awaamiirta ay soo saarto ayaa waxaa jabiya isla xubno ka tirsan dowladda, kuwaasi oo dhagaha ka fureysta dhaqangelinta awaamiirta dowladda ay soo saarto.
Inkastoo ammaanka Magaalada Muqdisho uu yara hagaagsan yahay, haddana xilliyada qaar Magaalada waxaa ka dhaca falal lidi ku ah dhanka ammaanka oo ay fuliyaan rag ka tirsan Shabaab iyo kuwa kale oo ujeedo gaar ah leh.